नियमित रुपमा खाने गर्नुहोस करेला, यस्ता छन् फाइदै फाइदा ! | सुदुरपश्चिम खबर
नियमित रुपमा खाने गर्नुहोस करेला, यस्ता छन् फाइदै फाइदा !
तीतो–टर्रो करेला अधिकांशलाई मीठो लाग्छ । मीठो मात्र हो र ? क’रेला आफैमा पोषक तत्वले भरिपूर्ण तरकारी पनि हो । यसमा प्रोटिन, क्याल्सियम, कार्बोहाइड्रेट, फस्फोरस, भिटामिन आदि तत्व पाइन्छ । मधुमेह, उच्च रक्तचाप जस्तो दीर्घ रोगमा पनि उत्तिकै लाभदायक हुन्छ करेला । त्यसो त करेलालाई थरीथरीको स्वादमा बनाएर खान सकिन्छ । भुटेर, झोल हालेर, अचार बनाएर । स्वाद अनुसार जसरी सेवन गरेपनि हुन्छ । यद्यपि करेला मीठो बनाउने चक्करमा धेरैले यसको पोषक तत्व नष्ट गर्छन् । अधिकांशले करेलालाई तेलमा तारेर खान्छन् । डिप फ्राइ गरेर करेला खाने गरिन्छ । तर, यसरी तयार गर्दा करेलामा रहेको पोषक तत्व नष्ट हुन्छ । क’रेलालाई उसिनेर सेवन गर्नु एकदमै लाभदायक हुन्छ । तपाईंलाई लाग्न सक्छ, उसिनेर पनि यसको स्वाद हुन्छ ?
१. कलेजोको रो’गीलाई करेला सेवन लाभदायक हुन्छ ।
३ं करेलाले पाचनशक्ति दुरुस्त राख्छ, भोक जगाउँछ ।
४. द’मको बिरामीले करेलाको सेवन गर्नु राम्रो हो ।
६. करेला चिसो हुन्छ । त्यसैले गर्मीबाट पैदा हुने रोगीका लागि यसले राम्रो काम गर्छ
। ७. कफको रोगीले करेला सेवन गर्नुपर्छ ।
आमा नै हुन् सबैभन्दा छुच्ची धेरै बच्चाहरुलाई लाग्छ, संसारमा सबैभन्दा छुच्चा कोही छन् भने तिनी आफ्नै आमा हुन् । अरुका आमाले आफूलाई कति माया गरिरहँदा आफ्नी आमाले भने सधैं गाली गरेपछि धेरै बच्चाहरुलाई यस्तै सोचाई आउने गर्छ । गर्भमा हुँदादेखि नै कैयौं पटक हामीले आमालाई नै यातना दिएर आयौं ।
बाहिर जन्मिएपछि पनि जसरी हुन्छ बच्चाहरु आमालाई नै यातना दिन्छन् । तर, कहिलै पनि देखावटी रिसको अलावा आमामा वास्तविक रिसको सञ्चार हुँदैन । तर, बाल्यकालमा धेरैलाई संसारको सबैभन्दा छुच्ची आमा नै हुन् भन्ने लाग्छ । घर पुग्दा सबैभन्दा पहिले आमाको खोजी कतैबाट घरमा आउँदा आमा हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले जो कोहीले पनि आमाको नै खोजी गर्छ । त्यसमा के स्वार्थ जोडिएको हुन्छ त्यो आ आफ्नै कुरा होला ।
आमा हुनुहुन्न भने त्यो घर नै सुनसान हुन्छ । शून्य हुन्छ । स्वार्थ पनि अरु केही होइन । यसलाई हरेक सन्तानको आमाप्रतिको प्रेम भने पनि व्य’वहार भने पनि एउटै हो । घरमा केही कुराको खोजी गर्नु पर्यो भने सिधै आमालाई नै नसोध्ने मान्छे कमै होलान् । घरमा अरुसँग जति नै धेरै निकट भएपनि यस्ता केही विषयहरु छन् ।
जहाँ बाबुभन्दा आमालाई नै धेरै वास्तागर्ने गरिन्छ । आमासँग नै हरेक प्रश्नको उत्तर भेट्ने भएकोले हुनसक्छ आमासँग नै हरेक प्रश्नको खोजी हुनेगर्छ । आमासँगको अन्तर्वार्ता बा’लापनदेखि नै चल्दै आएको हुन्छ । त्यसैले पनि कोही आमासँग केही कुरा सोध्न सं’कोच मान्दैनन् ।
आमाको सर्वाे’च्चता आफ्ना बच्चाहरूका लागि सबैभन्दा विशेष, दयालु, सुन्दर र उदात्त हुन्छन् हरेक आ’माहरु । सा’धु सन्तहरु आमाको मा शब्द आउने सबै शब्दहरु पु’ज्य हुने बताउँछन् । केवल आ र मा को दुई शब्दमा नै सिं’गो संसार र सिं’गो ब्रहृ’माण्ड जोडिएको छ ।
यो ब्रहृ’माण्डको या’त्राको पहिलो बिन्दु आमाको का’खबाट नै सुरु हुन्छ । त्यसैलाई आ’माको सर्वाेच्चता मान्न सक्छौं । न त कुनै तालिम न त कुनै अध्ययन । सन्तान जन्मि’एपछि आफैं आउने दि’व्य ज्ञान हो बच्चाहरुको हे’रचाह गर्ने ज्ञान । आफूलाई भो’क लाखेको थाहा नहुँदै आमाले आफ्नो बच्चालाई भोक लागेको कुरा थाहा पाइसकेकी हुन्छिन्, यही हो आमाको स’र्वाेच्चता ।
आफ्नो बच्चालाई के मन पर्छ र बच्चालाई कसरी खुशी दिने रु भन्ने कुरा केवल आमालाई जानकारी हुन्छ । यही हो आमाको सर्वाेच्चता । बच्चाको चि’च्याहटबाट उसको आवश्यकता बुझ्ने क्षमता केवल आमासँग हुन्छ । त्यही हो आमाको सर्वाे’च्चता ।
विश्वभरी उस्तै जि’ज्ञासा आमाको सर्वाे’च्चतालाई केवल नेपालमा मात्रै मानिँदैन । विश्वका हरेक कु’नामा यसको महत्वका साथ हेर्ने गरिएको पाइन्छ । केही दिन अघि अल’जजिराको एक टेलिभिजन कार्यक्रममा केही कोलम्बियाका बच्चाहरूलाई निम्त्याइएको थियो ।
त्यहाँको आमा दिवसको दिन उनीहरुलाई स्टुडियोमा बोलाएर आमाको बारेमा जानकारी लिनको लागि भनिएको थियो । कार्यक्रममा निर्देशक बच्चाहरूलाई सोधे, उनीहरूलाई आफ्ना आमाको कुन व्यव’हार मन पर्दैन रु कतिपयले आफूलाई गा’ली गरेको मन नपर्ने बताए, कसैले आमा आफ्नी आमा धेरै समय आफूसँग नभएको विषयलाई आमाको न’राम्रो बानीको रुपमा औ’ल्याए । जसमा अधिकांश बच्चाहरुले अन्यको आमाबाबुसँग तुलना गरेर आफ्नी आमाले कम समय दिएको विषयलाई नै आमाको क’मजोरीको रुपमा औंल्याए ।
यो बालापनको अबो’ध निर्णय हो । जुन आमाले आफ्नो बच्चालाई पि’ट्ने कुरा कुनै रि’स र आ’वेगमा आएर पि’टेको होइन भन्ने । कुनै बच्चा स’डकमा खेलिरहेको छ र गाडी कतैबाट आएको छ भने आफ्नो ज्यान धरा’पमा राखेर पनि आमाले बच्चालाई बचाउँछिन् र एकपटक ठूलो स्वरमा गा’ली गर्दै एक झा’पड पनि लगाउँछिन् ।
सो अध्ययनले पत्ता लगायो कि यो केवल एउटा प्रे’म हो, आ’वेग होइन । तर, बालदि’मागले यसलाई आमाको न’राम्रो बानी सम्झन्छन् । यही नै उनीहरुको कमजोरी हो । बा’लापन हो ।सोही टेलिभिजन कार्यक्रममा बाहिर निस्किएपछि जो जो बच्चाले आमाको न’राम्रो गु’णबारे गुनासो गरेका थिए ।
उनीहरु नै सबैभन्दापहिले आफ्नी आमाको खो’जीमा लागे । त्यहाँ केही अरु नै महि’लाहरुलाई उनीहरुलाई माया गरेर बोलाउनको लागि भनिएको थियो । तर, उनीहरु अरुसँग र’माउन सकेनन् । ( urlabarinews.com बाट साभार )